သင်ဒီမှာရှိပါတယ်: နေအိမ် ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှု ပြောင်းလဲမှုအသွင်အပြင်, ဘဝပုံစံပြောင်းခြင်း ...
ပြောင်းလဲမှုအသွင်အပြင်, ဘဝပုံစံပြောင်းခြင်း ...
ဒါဟာဆံပင်လူအစုအဝေးထဲကနေခွဲထုတ်ပါလိမ့်မည်, တစ်ဦးက Man အဖြစ်, နှင့်အမျိုးသမီး. အာဖရိကကျစ်ချက်ချင်းနှစ်အနည်းငယ်နုပျို. အခုတော့ဆံပင်၏ရှည်လျားထူထဲဦးခေါင်းမရှိတော့အိပ်မက်ဖြစ်ပြီးအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
အမှုပေါင်းရှိပါတယ်, သည့်အခါတစ်ဦးအပျော်တမ်းဆံဥစ္စာဆံပင် Perm မအောင်မြင်သို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒ. ဒါဟာမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောကြည့်, အနည်းငယ်, unpleasantly. ဤအခြေအနေမှသာ afrokosichki သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်. ထိုသို့သောမူကွဲဆံပင်နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အဝတ်လျှော်လိုအပ်ပါတယ်. အိုးမိန်းကလေးငယ်များကိုသိရ, ကနံနက်ယံ၌ဆံပင် lay သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆံပင်နှင့်အတူတက်လာဖို့ဘယ်လိုခက်ခဲဖြစ်ပါသည် (ဥပမာအား, ဆံပင်ညှပ်အဆငျ့ဆငျ့).
အထက်ဖော်ပြပါအားလုံးအပြင်, အာဖရိကကျစ်အရောင်မရှိဘဲသင်၏ဆံပင်၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်. အများဆုံးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရိပ်ထဲမှာအများဆုံးသတ်တိရှိလူများအတွက်သင့်လျော်သောကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အတုအမျှင်တစ်အမျိုးမျိုး, တစ်ဦးထက်ပိုသောငြိမ်းချမ်းသောများအတွက်. နူးညံ့သိမ်မွေ့တန်ချိန်သဘာဝဆံပင်အရောင်နှင့်အတူ alternated နိုင်ပါသည်, အရှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆေးဆိုးသို့မဟုတ်အရောင်ကို.
ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအပြင်, နှင့် afropricheski အတော်ကြာအမျိုးအစားများရှိပါတယ်. ပုံမှန်မဟုတ်သော pigtails curly များမှာ, "Live" (အဆိုပါတံစို့၏အစွန်အဖျားပေါ်တွင်အမြီးဖြစ်ပါသည်), ပြင်သစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုစသည်တို့ကို.
ဒါဟာဆံပင်အချိန်ကုန်ဖြစ်ပါသည်. သူ့ကိုမှတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြတ်, ကျစ် Weave 2-3 မာစတာ. ကြွက်သားတင်းမာမှုများ၏အလေ့အထမှသည်, ပထမဦးဆုံးနေ့၌ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်. အောက်ပါနေ့ရက်ကာလ၌, အရာအားလုံးသည်၎င်း၏ပုံမှန်ပြည်နယ်သို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်. လူထု, တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံ (ကခုန်, အားကစား), မျက်နှာနှင့်ဆံပင်၏နယ်စပ်ဒေသများတွင်ယားယံစေနိုင်ပါသည်. ဒီအမတည့်တော့မဟုတ်ပါဘူး. အရေပြားအောက်ဆုံးအဖုံးခေါင်းကိုပဲထိုကဲ့သို့သောဆွဲငင်အားဝတ်ဆင်ဖို့အသုံးမခံခဲ့ရ, နှင့်ကျစ်၏အလေးချိန်မှတုံ့ပြန်မှုပထမဦးဆုံးအကြိမ်.
အသစ်တစ်ခုကိုဆံပင်ဆေးကြောပါ, သင်ကအနည်းဆုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်နိုင်. ဒါပေမဲ့, afrokosichki ဘဝကိုရိုးရှင်းဖို့ကိုတီထွင် (ဖတ်, အာဖရိကကျစ်ကျစ်ဖို့ဘယ်လို). ထိုကွောငျ့, shampooing ကြိမ်တစ်ပါတ်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ် afropricheske. အဓိကအရာ - ကခေါင်းလျှော်ရည်၏အကြွင်းအကျန်ကွာဆေးကြောဖို့ကောင်းလှ၏, မဟုတ်ရင်သူကခန်းခြောက်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဦးခေါင်း madly ယားယံမှစတင်သည်. အဆိုပါဒုက္ခနေဆဲဖြစ်ပွားခဲ့သည် အကယ်., ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုလျှော်. ရေချိုးကျစ်အလွန်အဆင်ပြေပျော့ပျောင်းရေမြှုပ်. သူတို့ရဲ့ပွတ်သပ်ရန်မလိုအပ်, ဗာလစံစေးကိုလျှောက်ထား, လေအေးပေးစက်, လြျှော. ပဝါနှင့်အတူဆံပင်စိုစွတ်ဖို့လိုအပ်သောခြောက်သွေ့ရေလုပျထုံးလုပျနညျးပြီးနောက်.
ယင်းအချိန်ကျစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြွလာသည့်အခါ, ပိုကောင်းမာစတာမှဖွင့်ဖို့. ဒါကြောင့်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ painlessly ရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည်. ဒီမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်ကိုယ်တိုင် untwisted လုပျနိုငျ. ဆံပင်အမြဲခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်သင့်. တစ်ဦးက start များအတွက်, သငျသညျအရပျ pigtails ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဘယ်မှာအဆုံးကိုယ်ပိုင်ဆံပင်, ... နှင့်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ဒြပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း. ထို့နောက်အားလုံးအာဖရိကဖိုင်ဘာဖွတ်မြီးထိုး၏အကြွင်းအကျန်ကိုဖယ်ရှားမယ့်အမြီးဖြီးသုံးပြီး. ဆံပင်လက်ဝဲဖြီးရန်မတင်းကျပ်ဖြီးနှင့်အတူ. ကြောက်တယ်ငွေပမာဏဖြီးဆံပင်ဖြစ်မနေပါနဲ့. စည်းကမ်းအဖြစ်, တစ်နေ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်းကိုကျရောက် 100 volosinok. သူတို့ရဲ့ဆံပင် zapletennoj အတွက်
ဘယ်နေရာမှာသွားကြဖို့, သူတို့မီးသီးပယ်ကျကြ, နှင့်တန်းစီနေ. ဆံပင်အမြောက်အမြားကျသေလွန်သောသူတို့သည်ကျစ်ဖယ်ရှားပြီးနောက်.
afrokosichek များအတွက် contraindications ရှိပါတယ်:
– seborrhea; – ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်;
– ပွန်းစားခြင်း, ကုတ်ခြစ်ရာ;